Mbatata dzakaiswa sipinachi nechizi | Bezzia
Mbatata dzakaiswa sipinashi nechizi
Maria vazquez | | Salads uye miriwo
Iwe unenge uchida izvi mbatatisi yakafukidzwa nesipinashi uye chizi. Uye ndezvekuti vanogona kushandiswa sechikafu chikuru, asiwo sechishongo chezvokudya zvakawanda, zvakakodzera kunyanya nechidimbu chenyama kana nyama. yakagochwa kana pani salmon. Muromo hausi kutodiridza here?
Mbatatisi dzakaiswa idzi nyore kwazvo kugadzirira, kunyange zvazvo tisingagoni kuramba kuti zvinotora nguva. Inguva yatichazova nezvakawanda zvekuita kunze kwekutarisa muhovhoni, asi nguva pakupera kwezuva. Iye zvino, kuravira kwekupedzisira kwembatatisi idzi kwakakosha.
Iwe unogona kushandisa cheese yaunoda zvakanyanya kugadzira iyi resipi. Kubva pablue cheese kana iwe uchitsvaga yakanyanyisa uye yechokwadi flavour kune cream cheese kuti uwane mhedzisiro uye yakapfava. Kana iri sipinachi, unogona kushandisa zvese zvakaomeswa nechando uye nyowani kana kuita pasina ivo. Ndakazviita mune imwe mbatatisi, kunyange zvazvo mari yacho yakaverengwa kuitira kuti sipinashi ivhare zvose.
2 mbatatisi hombe
20 g. yemafuta
3 tablespoons yekirimu
200 g. Sipinachi
Preheat oven kusvika 220ºC.
Baya mbatatisi neforogo woiisa mupani yakavharwa nebepa rekusazora mafuta. Zvibike kweawa kana chimwe chinhu, kusvikira dzanyorova.
Zvadaro vabvise kubva muchoto uye zvicheke nepakati. Vabvise, kuchengetedza ganda "mbiya" kune rumwe rutivi uye nyama yakabviswa mundiro.
Sanganisa nyama iyi pamwe 15g. yebhota, kirimu, chizi uye pinch yemunyu uye mhiripiri uye kuchengetedza.
Dzokera kumidziyo yematehwe. Isa chidimbu chiduku chebhota yakasara mune imwe neimwe uye bika 8 maminitsi kuti crisp. Kana wapedza, bvisa kubva muchoto uye chengetedza.
Zvino blanch sipinashi muhari ine mvura, uchiasuma kana yatanga kufashaira woabvisa 20 seconds gare gare. Zvadaro zvidhire kuti ubvise mvura yakawanda sezvinobvira.
Sanganisa sipinachi nembatatisi yakakanyiwa uye uzadze matehwe nemusanganiswa uyu.
Bika maminitsi makumi mashanu, kusvika kumusoro kwaita golden brown wobva wavabvisa muchoto.
Nakidzwa nepinashi inopisa uye cheese yakakanyiwa mbatatisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Salads uye miriwo » Mbatata dzakaiswa sipinashi nechizi
Ndedzipi pfungwa dzisina kunaka dzinowanzogara dzichiitika?
Chii chinonzi nutricosmetics uye ingakubatsira sei?